Faaiidada Noolaha Kala Duwan - Xogside-news
Home BARNAAMIJYADA Faaiidada Noolaha Kala Duwan
Faaiidada Noolaha Kala Duwan
Dad badan ayaa la kulma qaniinyada Qudhaanjada meel kasta oo dunida ah, laakiin dadkaasi waxay si dhakhso u dilaan Qudhaanjada yar ee qaniintay, taasi oo ah khalad. Dilka Qudhaanjadu maaha arin sax ah madaama ay tahay noole yar oo waxtar leh. Haddii u qofka ay qaniintay ogaan laha faaiidada uu jidhkiisu ka helay wuu u mahadniqi lahaa.
Faaiidyonka jidhka qosku ka helo qaniinyada qudhaanjada waxa ka mid ah:
Iyadoo qaniinyadaasi firfircooni gelisa hab dhiska wareegga dhiigga, waxaana kordha xinjirta ku jirta dhiigag cas.
Qaniinyada Qudhaanjadu waxay kobcisaa maskaxda waxayna awood siisaa unugyada dareenka ee maskxda. Waxa kale oo Qaniinyada qudhaanjadu ay u wanaagsan tahay maqaarka sare oo iska difaaci kara bakteeriyada.
Qaniinyada Qudhaanjadu waxa kale oo ay siisa xididdada dhiigga awood ay iskaga caabbiyaan suntan, taasi oo iyana caawisa beerka.
Waxa kale oo la sheegay in marka ay ku qaniinto Qudhaanjada dhedig ay dhareerka carabkeedu ku hadho jidhakaaga kaasi oo faa’iido badan u leh (amount of ionic saliva) waxaana uu gubaa oo baabiiyaa dhamaan baruurta iyo duxda jidhka. Haddii ay gacanta kaa qaniinto duxda ku jirta 99% way baabiisaa.
Previous articleSirdoonkii Qarsoona
Next articleWax Badan ka Ogow Macluumaad Guud oo ku Saabsan Faaiidada Cunista Kalluunka